skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Internet Problems » skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem]
1 skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 27th March 2010, 7:44 pm
သူကို gtalk လို့ပဲသုံးရတာလား ပြီတော့ port No. ...... က ဘာကိုသုံးတာလဲ
2 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 27th March 2010, 8:12 pm
အဲဒိ port တွေဘာတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်းလိုမယ်ထင်တယ်... သေချာတော့မသိဘူး... ကျနော်တို့ကတော့ ဒီအတိုင်းပဲသုံးနေတာဆိုတော့... အင်တာနက်မိတာနဲပရတယ်လေ... သူက vzo တို့ လိုပါပဲ... ဒါပေမယ့် သူက နညး်နည်း ရုပ်ထွက်ညံ့တယ်... vzo ကပိုကောင်းတယ်... connection ကျတော့လညး် တူတူလောက်ပါပဲ... သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လညး်သုံးပါ... သုံးဖူးတာပေါ့... အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံတွေ၊ အနောက်နိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာ အဲဒါပဲသုံးပါတယ်ဗျာ... အသံလညး် ရတယ် ရုပ်လညး်ရတယ်... skype to skype ဆို free ပါတဲ့ဗျာ... ကျနော်လညး်အဲလောက်ပဲပြောပြတတ်တယ်...
3 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 28th March 2010, 10:53 am
Port တွေက Cyber မှာသုံးရင် ကိုယ်ပြောင်းချင်သလို ပြောင်းလို ့ရပါဘူး..
အဲဒါတွေကို Server ကထိန်းထားရင် ဘာမှလုပ်လို ့ရဘူး..
Skype က Pfingo နဲ ့တူပါဘူး..
အကာင့်လုပ်ပြီးနာရီဝယ်ထားရင်တော့..တခြားနိုင်ငံတွေကို အွန်လိုင်းက နေ
ဖုန်းခေါ်လို ့ရတယ်..စျေးကတော့ Pfingo ထက် သက်သာတယ်လို ့ဆိုတယ်
Pfingo က Chat လို ့ရဘူး
Skyp က Chat လို ့ရတယ်
4 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 28th March 2010, 3:35 pm
Skype က အွန်လိုင်းဖုံးခေါ်ဆိုမှု မှာ pfingo နဲ့ မတူပါဘူး သူရဲ့ call rate က pfingo နဲ့ ကွာပါတယ် နောက် ပြီး အကောက့်ကို ဖွင့်တာမှာ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် pfingo topup ကဒ် လို ပဲ skype ကို ၁ လ အတွက် ဆိုရင် အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ ဆိုရင် အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖွင့်လိုရပါတယ် သူက ၁၆ ကျပ်လောက်ကျပါတယ် ခေါ်ဆိုလို့ ရတဲ့ နိုင်ငံတွေက တော့ ကန့် သတ်ထားပါတယ် ( အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ စင်ကာပူ၊ ယိုးဒယား၊ ဟောင်ကောင် နဲ့ တရုတ် ) ဆိုပြီး အားလုံး ၆ နိုင်ငံရပါတယ် အဲ့ဒါကို ABC Computer Center မှာ ဖွင့်လို့ရပါတယ် နောက် တစ်မျိုးက တော့ စင်ကာပူ သို့မဟုတ် ဟောင်ကောင် မှာ ဘဏ်အကောင့် ရှိမှ ဖွင့်လို ရပါတယ် သူ ကတော့ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကို ခေါ်လို ရပါတယ်
skype ကို သုံးမယ်ဆိုရင် tool ထဲ က option ကိုအရင် သွားပြိး ကြည့်လိုက်ပါ
connection ကို ရွေးပေးထားပါတယ် အဲ့ဒီမှာ use port အနောက် က box မှာ 443 ကို ရိုက် ရပါမယ်
အောက် က box တွေ မှာတော့ ကို အသုံးပြု တဲ့ IP address နဲ့ post ကို ရေး ရပါမယ်
ပြီးရင် save ကို နှိပ် ပြီး ကိုယ် အသုံးပြု ချင်တဲ့ အကောင့်ကို အသုံးပြုလို့ ရပါတယ်
ကျွန်တော် လည် သိသလောက် ပြောတာပါ အမှားပါ ရင် ခွင့်လွတ်ပါ
တကယ်လို့ ဒီထက်ပိုသိချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ကျွန်တော် email - [You must be registered and logged in to see this link.] ကို မေးလ် ပို့ လိုက်ပါ
Last edited by Fox on 7th August 2011, 3:14 am; edited3times in total (Reason for editing : Colour edited > Red color is only for admin)
5 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 28th March 2010, 5:07 pm
အကိုရေ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကိုခေါ်မယ် ဆိုရင် မြန်မာ က နေ register လုပ်လို့ မရဘူး လား ခင်ဗျာ
လုပ်လို့ရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်ကို ပြော ပြ ပေး ပါ ခင်ဗျာ
6 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 28th March 2010, 11:26 pm
MagicEyez wrote: အကိုရေ တစ်ကမ္ဘာ လုံးကိုခေါ်မယ် ဆိုရင် မြန်မာ က နေ register လုပ်လို့ မရဘူး လား ခင်ဗျာ
ကျွန်တော့် အထင်တော့ Register တော့လုပ်လို့ ရမယ်ထင်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်တခြားတစ်နေရာကို ဆက်ဖို့အတွက် ၀ယ်ဖို့ ဆိုရင် တော့ Credit card တွေ ဘာတွေ ရှိမှ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် ...
7 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem] on 29th March 2010, 11:55 am
အင်း နိုင်ငံ စုံခေါ်ချင်တယ် ဆိုရင် တော့ ဟောင်ကောင် သို့မဟုတ် စင်ကာပူ တစ်ခုခုမှာ ဘဏ်အကောင့် တစ်ခု ဖွင့် မှ ရမှာ ပါ အခု လည် အဲ့ဒီ ၀န်ဆောင်မှု ကို ABC ကွန်ပျူတာ ဆိုင်မှာ လုပ်လို့ ရမယ် လို့ ထင်ပါတယ်
သူ ရဲ့ ခေါ်ဆိုမှု rate ကို လိုချင်ရင် တော့
မှာ ၀င်ပြီး ကြည့်လို့ ပါတယ် သူမှာ အကုန်ပြထားပါတယ်
သူ့ ရဲ့ ခေါ်ဆို မှု နှုန်းကတော့ pfingo နဲ့ မတူပါဘူး သူက အချိန်ကြာကြာပြော လေ စျေးသက်သာလေပါ
edited by mars (using code)
8 Re: skype အကြောင်းပြောပေးပါ [Problem]